Shiinaha bacda kartoo loogu talagalay haweenka saarayaasha, shirkado, warshad - xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Bacda duffle Bacda duffle > Boorsooyinka duffle ee haweenka
1. Ma hagaag baa in la qaato shandad duug ah marka lagu daro boorsada marwada ee diyaaradda?
Lacagta alaabta lagu qaato
Duulimaadyada gudaha: Rakaabka heysta tikidhada heerka koowaad waxaa loo oggol yahay labo nooc oo shandado qaadasho ah qofkiiba, rakaabka haysta fasalka ganacsiga iyo tikidhada heerka dhaqaalaha waxaa loo oggol yahay hal boorso oo lagu qaado qofkiiba. 20 × 40 × 55 cm. Wadarta culeyska labada shay kor ku xusan kama badnaan 5 kg Duulimaad caalami ah: shandad kasta oo shandado ah kama badato 20 × 40 × 55 cm, wadarta culeyska shandadaha gacantu kama badna 7 kg. Heer ka sarreeya, waxay u baahan tahay in la hubiyo.
3. Midabkee shandadu fiicantahay?
(1) Madow waa wasakh u adkaysi badan oo si fudud loola jaanqaadi karo dharka, markaa waxay noqotay midabka xulashada shandadaha.
(2) Xaqiiqdii, buluug mugdi ah, cawl mugdi ah ayaa noqon kara Midabka bunni ma xuma, sidoo kale. Waaxda midabka iftiinka sidoo kale waa in si taxaddar leh loo adeegsadaa, midna uma adkeysanayo wasakhda, kan kalena kuma habboon ragga.
(3) Madoow ama bunni, sanduuqa usha jiida guud ahaan ma ahan midab, badiyaa bunni iyo madow badan waana lab.
Tan guud ahaan waxay ku saleysan tahay dookha shaqsi ahaaneed Guud ahaan madow, jawi buluug badan, waxay umuuqataa wax yar oo qaan gaar ah, casaankuna wuxuu umuuqdaa mid yar, xoogaa jilicsan.
4. Maxay yihiin xirfadaha xulashada shandadaha?
surface1ï¼ ‰ dusha sare: fidsan, siman, tollanimo naqshad lahayn, xumbayn la'aan, geesaha qallafsan ee soo ifbaxay.
2ï¼ ‰Gudaha: ha ahaato xulashada dharka ama alaabta maqaarka, midabku waa inuu la jaanqaadaa dusha sare. Dahaadhka dahaadhku intaa ka sii badan yahay, toliddu waa inay fiicnaataa, oo aanay ka weynaan.
3ï¼ ‰Suunka: qayb muhiim ah oo ka mid ah boorsada, laakiin sidoo kale u nugul waxyeellada. Hubso inay jiraan xargo iyo dildilaacyo ku yaal xargaha, iyo in xiriirka ka dhexeeya dhabarka dambe ee jirka iyo xirmada jirku ay tahay mid adag. suunka, iyo qoyska boorsada ayaa fiiro gaar ah u yeelan doona sidashada iyo adkaysiga suunka, fiiro gaar ah u yeelo xulashada.
ï¼ˆ4ï¼ ‰Qalabka: sida qurxinta banaanka ah ee xirmada, waxay leedahay doorka dhameystirka taabashada.Marka la dooranayo boorso, qaabka qalabka, sameynta shaqada gacanta waa inay ahaato mid aad u feejignaan leh, haddii qalabka la soo bandhigo inuu yahay mid guur ah, waa inuu raadsadaa talo in si fudud loo libdho Sida la jiido sanaadiiqda usha, sanaadiiqda la isku qurxiyo iyo bacaha kale ee gacmaha lagu haysto, waa inaan fiiro gaar ah u leenahay.
5ï¼ ï¼Mawduuc: haddii bacda lagu tolay dunta cad ama dunta mugdiga ah, dhererka cirbada cagtu waa inay ahaataa mid isku mid ah, oo waa inaanu jirin dun la kashifay. Fiiro gaar ah u yeelo in duuduubku uusan lahayn laalaabku, ama in duntu tagtay, oo bal fiiri in meesha madaxa siliggu uu ku keenayo dildilaaca bacda.
6ï¼ ï¼xabagta: markaad dooranayso xirmada, hubi inaad jiido qaybaha, fiiri in xabagta ay adagtahay iyo gaar ahaan qaar ka mid ah boorsooyinka moodada badan, maxaa yeelay qaabka ayaa wanaagsan, qurxinta ayaa heer sare ah, sidaas darteed waxay noqon doontaa mid indhaha soo jiidasho leh, laakiin haddii qurxinta ma aha mid aad u adag, waxay waayi doontaa astaamaheeda.
7ï¼ ‰jiid: hubi haddii khadka ku hareeraysan cufan, iyo xirmada xirmadu ay tahay mid dabiici ah Gaar ahaan, qaar ka mid ah boorsooyinka muhiimka ah, bacaha qurxinta iyo wixii la mid ah ayaa ku keydin doona waxyaabo badan oo adag bacda, fiiro gaar ah waa in la siiyaa.
8ï¼ ‰badhamada: in kasta oo ay tahay qalab aan qiimo lahayn, marka la barbar dhigo sibinka, sidoo kale way fududahay in la beddelo, markaa waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid xulashada. Boorsooyinka si joogto ah u fura una xirma, sida kiisaska CD-ga iyo boorsooyinka, wax ku oolnimada xajinta waa in la tixgeliyaa.
Midabkee ayaa u fiican shandada? Xaqiiqdii, midabka shandaddu aad buu u badan yahay. Midabada kaladuwan waxay leeyihiin saameyn muuqaal oo kaladuwan, midabbo kaladuwana waxay ku haboon yihiin hirgalinta dadka. Laakiin waqtiga iibsiga si waxbadan looga fahmo xirfadaha xulashada shandaduhu waa maxay, si iibsashada shandaduhu ay ugu sahlan tahay, laakiin sidoo kale inbadan awood u leh inuu doorto shandad wanaagsan.
5. Boorsada boorsada iyo gaadiidka ardayda dugsiga dhexe
Waxaan xiriiri doonaa 24 saacadood maalintii.Waxaan si hufan ula xiriiri doonaa si loo hubiyo isgaarsiinta habsami ee macluumaadka.
Calaamadaha kulul: Bacaha dhaffle ee haweenka, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, loo habeeyay, qiimaha, oraahda, keydka